Avy aty an-drenivohitra hizotra ho any Mahajanga ireo mpianatra nomban’ny mpanabeny hanao “Voyage d'étude” izao tra-doza izao. Efa nihoatra an’Ankazobe izy ireo, tamin’ny Pk 130, araka ny tafa manokana nifanaovana tamin’ny lehiben’ny borigadin’ny zandariamariam-pirenena any an-toerana. Araka ny voalazan’ny mponina any an-toerana, nivadika in-droa ilay fiara marika “Mercedes Sprinter”. Niisa 25 ireo mpandeha, efa nahazo ny fitsaboana tao amin’ny hopitaly Ankazobe avokoa ireo 11 mianadahy naratra. Tsy nisy ratra be ka tsy voatery nentina niakatra nihazo ny renivohitra. Efa tsy misy ahiana ny ain’izy ireo fa “efa makamaka aina”, araka ny loharaom-baovao avy any ifotony. Nitantara ireo niharam-boina fa vokatry ny fandehanana mafy notanterahin’ny mpamily ilay fiara mpitatitry ny Sotrate no nahatonga izao loza izao. Nanamafy io tsy fitandremana io ny mpitandro filaminana izay nanatanteraka ny fizahana ny loza : “Sady efa anaty fiolahana mbola nandeha mafy loatra “ ka izay no nampivarina tany ankady ilay fiara. Nanampy trotraka ihany koa ny orana izay nampalama ny lalana sy ny tsy fifehezan’ny mpamily ny lalana amin’ny maha mpanamory azy tamin’ny lalam-pirenena faha-telo nefa nizotra mafy am-bavaloza tamin’ny lalam-pirenena faha-4.